Abaarta Ka Jirta Puntland Oo Saamayn Xooggan Ku Yeelatay Duunyada | puntlandi.com
Tuesday, January 17th, 2017 | Posted by Pi
Daayeer raxan-raxan u socda ayaa weerar ku qaadaya oo xoolaha iyo raashinkaba ka cunaya xoolo-dhaqatada ku nool miyiga degmooyinka Xuddun iyo Laascaanood ee gobolka Sool. Weerarradan oo uu billaabay saddexdii bilood ee la soo dhaafay ayuu kordhiyay toddobaadyadii u dambeeyay, maaddaama ay abaartu ka sii darayso.
Abaartaas oo ka dhalatay roob la’aan deegaannadaas ka jirta muddo sanad ah ayaa baabi’isay mirihii iyo waxyaabihii kale ee uu daanyeerku ku noolaan jiray.
Cabdirisaaq Maxamed Aadan oo ka mid ah dadka xoolaha ku dhaqda miyiga deegaanka Holhol oo qiyaastii 35 km u jira Xuddun ayaa warbaahinta u sheegay in toddobaadkii ugu dambeeyay bishii hore ee Diseembar uu daayeerku ka cunay ilaa 15 neef oo ari ah. Wuxuu xusay inta uu ka warqabo in ilaa lix neef oo geel ah oo kici kari waayay abaarta darteed uu daayeerku ku cunay deegaanno u dhow miyiga uu joogo.
Reer miyigu waxay sheegeen in neefka ariga ah ay ku degayaan ilaa 50 xabbo oo daayeer ah, kaddibna ay daqiiqado gudahood ku dilayaan, iyagoo dhiigga ka miiranaya, hilibkana ka cunaya.
“Awalba iyada oo ay dhibaato nagu haysay abaarta oo aan u taag la’ayn helista raashinka carruurta, kana walwalsaneyn sidii aan daaq iyo biyo ugu heli lahayn xoolaha yar ee noo haray ayuu haddana daayeerku noqday dhib kale oo nala soo dersay,” ayuu yiri Cabdirisaaq. Saddexdii bilood ee la soo dhaafay waxay abaartu ka dishay 235 neef.
Ariga waxaa badanaa raaca carruurta iyo haweenka, ragguna waxay qabtaan howlaha waraabka, hayaaminta iyo inay reerka u raadiyaan nolol-maalmeedka, hase yeeshee weerarka daayeerka ayaa Cabdirisaaq ku qasbay in uu howlihii kale oo dhan joojiyo, si uu maalin kasta u raaco 150 arigiisa uga haray maaddaama aanay carruurta ka celin karin daayeerka.
Wuxuu sheegay in uusan deegaankooda joogi jirin daayeer badan, balse ay u maleynayaan daayeerkan raxan-raxanta u socda inuu ka imaanayo qeybo dhinaca Togdheer oo abaarta ay si daran u saameysay uuna u socdo dhinaca gobolka Bari oo roob uu ka da’ay.